Startseite » Somali » Maan Maal - Somalische Märchen für Jung und Alt
Maan Maal - Somalische Märchen für Jung und Alt
Titel in Somali: Maan Maal
Sheekooyin Somaali ah: Carruur, dhalinyaro iyo waayeel
Sheekooyinka buuggan MAAN MAAL, qaark waa sheekooyin Soomaaliya caan ka ah, sida sheekada „Cali Duul-Duul“. Kuwaasoo intooda badan afka laga sheego, balse aan la qorin. Asagoo qoruhu aan dulucda sheekooyinka waxba ka beddelin, ayuu ballaariyey, qaarna asaga ayaa curiyey. Buuggani wuxuu ku habboon yahay, dadka aqriska jecel-yar iyo weynba, gaar ahaan waalidka raba, iney garaad ilmahooda kobciyaan. Waayo, waxaan hubnaa, in korinta ubadku aysan ka hortaga gaajada iyo arradka kaliya ahayne, dhisidda garaadkooda iyo aqoontooduna qayb korinta ka mid ah, ay
yihiin. Kolkey labaduba u kobcaan, ayey carruurtu baranayaan, iney maankooda iyo muruqooda maalaan, aayahoodana ay ka tashadaan. Goortey waalidku carruurtooda buuggaagta u aqrinayaan, waxay ilmuhu maqlayaan ku dhawaaqida
erayada. Sidaas ayeyna afkii ku dhandhansanayaan, aqriskana ku xiisaynayaan, buuggaagtana wehel ka dhiganayaan. Taasna waa yoolka uu qoraagu higsanayo, oo ah, inuu dadka yar iyo weynba aqriska ku dhiiri galiyo. Wuxuuna isku hawlay, in aqristeyaashu carruur iyo cirrooleba aysan sheekooyinkan ku caajisin, kana caajisin.
Sheekooyinka qaar waxay ka hadlayaan, iney maskaxi mici maquunin karto. In beentii mar ku quudisaa, ay mar ku ceebeyn karto iyo in uusan baqayl mahadnaq mudnayn. Kuwana waxay ka hadlayaan, qiimaha iyo miisaanka ay ballantu noolaha oo dhan u leedahay.